Top Videos from Dhamma Video - Page 4
151 1:39:39	Popular
152 05:34	Popular
153 51:27	Popular
ရွှေလင်းယုန်ဆရာတော် ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် ရွှေလင်းယုန်ဆရာတော်
154 3:58:39	Popular
by Admin5years ago 698 Views / 1 Likes
155 1:24:05	Popular
ဘုရားရှိခိုး ၊ ကိုးပါးသီလ နှင့် ပရိကာမ်။ Buddha Worship,Nine Precepts & Meditation Guide.
156 49:49	Popular
by Kappiya5years ago 696 Views /0Likes
Mya Kyauk Sayadaw - Naga Sakka Natural Cave Myanmar
158 1:51:07	Popular
159 1:03:15	Popular
by Admin3years ago 695 Views /0Likes
160 41:23	Popular
161 53:25	Popular
မိုးကုတ်ဆရာတော် - သစ္စာအကြောင်း တရားတော်
162 06:08	Popular
by Admin5years ago 691 Views /2Likes
Photos collection of me from 1983 to 1995 when my family went to kyite htee yoe say di (golden rock pagoda)every year. We use to go at least onceayear since long time ago when there didn't have car route. At that time we have to take the jungle path whi
163 14:05	Popular
ဘုန်းကြီးကျောင်းလဲမသွားနိုင်၊ အခွေလဲမရှာနိုင်၊ အဝေးရောက်နေသူများအတွက်မျှဝေပေးကြပါဗျာ
သဗ္ဗဇေယျမင်္ဂလာ ဂါထာတော် (အရှင်ဇဝန-မေတ္တာရှင်)
by Admin3years ago 690 Views / 1 Likes
သဗ္ဗဇေယျမင်္ဂလာ ဂါထာတော် ဆရာတော် အရှင်ဇဝန ( မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ)
165 32:03	Popular
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် (၁/၂) စွန်းလွန်းဆရာတော် ဦးဝိနယ (Sunlun)
166 1:55:28	Popular
ရှစ်ပါးသီလ တည်ဆောက်ပုံတရားတော် - မင်းကွန်းတိပိဋက ဆရာတော် (မြန်မာနက်)
ရှစ်ပါးသီလ တည်ဆောက်ပုံတရားတော် ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ, မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီး The late Mingun Sayadaw Gyi: "Keeping the Eight Precepts" (Myanmarnet.net)
167 2:30:16	Popular
နောက်ဆုံးဆယ်လ မြတ်ဗုဒ္ဓ တရားတော် သီတဂူဆရာတော်
နောက်ဆုံးဆယ်လ မြတ်ဗုဒ္ဓ တရားတော် သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ (မန္တလေး၊ မဟာဂန္ဓာရုံ) Aggamaha Pandita Thitagu Sayadaw, (Myanmarnet.net)
168 4:38:44	Popular
169 05:18	Popular
myanmar , စိုးစန္ဒာထွန်းနှင့် မင်းကွန်းတောင်ရိုး ၀တ်အဖွဲ့
170 52:29	Popular
SAYARDAW ASHIN NANDAKA AFTERNOON2PM DHAMMA TALK LIVE WEBCAST-MALAYSIA
171 1:04:56	Popular
SHWE PYI HEIN SAYARDAW AFTERNOON DHAMMA TALK LIVE WEBCAST 9/8/15
172 04:30	Popular
173 1:02:00	Popular
ပဋ္ဌာန်း၊ ဘုရားအနေကဇာတင် နှင့် ခုနစ်ရက်သားသမီး မေတ္တာပို့
174 03:46	Popular
175 52:57	Popular
176 05:08	Popular
177 1:09:21	Popular
ဆရာတော် ဦးဇောတိက 'ပင်ပန်းမှုလျော့နည်းစေရန်' တရားတော်
by Admin5years ago 673 Views /0Likes
178 1:20:39	Popular
Pilot Sayadaw Khan Dar5Par THi Yan Ah Yay Kyi Pone
by Admin5years ago 672 Views /0Likes
179 16:18	Popular
by Kappiya5years ago 671 Views /0Likes
180 46:00	Popular
သဲဖြူ နှင့် မဟာမြိုင်တောရ'''စတုတ္တနေ့ ပရိတ် တရားတော် နှင့် သံဝေဂ တရားတော်''၁၄.၇.၂၀၁၅မနက်ပိုင်း ၀၄း၃၀
181 1:06:18	Popular
ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ M.A ( Buddhism ),ဆရာတော်​ တရားတော်များကို Download လုပ်ယူလိုပါက အောက်ပါ Website သို့ Click လုပ်ယူနိုင် သည် http://www.dhammaceti.org/tayartaw.htm ဓမ္မစာပေများ ၊အခြားသောဆရာတော်ကြီးများ၏ စာအုပ်များနှင့် MP3 များကိုအောက်ပါ Link ၌ အခမ
182 06:46	Popular
အနန္တရာယိက ကမ္မဝါစာ - For Those Suffering From Various Diseases
For those suffering from various diseases or haunted... Please listen this very frequent... နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ သုဏာတုမေ ဘန္တေ သံဃော၊ သံဃော ဣမံ အာရာမံ သတ္တန္နံ ဗုဒ္ဓါနံ အနန္တရာယိကဇီဝိတာနံ သဗ္ဗဝေရဇိတာနံ သဗ္ဗဝေရာဘိဘဝ
183 58:51	Popular
by Admin5years ago 662 Views /0Likes
184 1:54:35	Popular
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လောက၀ိဇယလမ်းစဉ် နှင့် ဓမ္မအမေးအဖြေ - အပိုင်း (၁)
by Admin5years ago 662 Views /2Likes
185 11:42	Popular
by Kappiya5years ago 662 Views /0Likes
186 53:11	Popular
by Kappiya5years ago 661 Views /0Likes
187 48:58	Popular
မိုးကုတ်ဆရာတော် - ယနေ့အရေးကြီးဆုံး တရားတော်
188 05:29	Popular
189 4:02:57	Popular
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ၏ မေတ္တာပို့နှင့် တရားပွဲ
190 2:05:51	Popular
by Kappiya5years ago 658 Views /0Likes
191 57:38	Popular
by Admin3years ago 656 Views / 1 Likes
192 06:30	Popular
by Admin5years ago 655 Views /0Likes
193 1:06:56	Popular
Pilot Sayadaw Ah Pel Myo Sei
194 56:01	Popular
195 1:51:07	Popular
196 1:05:15	Popular
SHWE PYI HEIN SAYARDAW MORNING DHAMMA TALK LIVE WEBCAST
197 2:19:16	Popular
ဆရာတော် ဦးဇောတိက - မြင့်မြတ်မှုပျောက်ဆုံးနေခြင်း တရားတော်
(၃-၈-၂၀၀၃ - စင်္ကာပူ)
198 5:07:42	Popular
199 1:02:48	Popular
200 07:06	Popular